मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेको निर्णय सार्वजनिक भएको छ । यही बीचमा कुलमान घिसिङ अमिलो मन लिएर आफ्नो कार्यकक्षबाट बिदा भएको खबर पनि बाहिर आएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले गरेका कति सरकारी नियुक्तिहरू कानूनी प्रक्रिया पूरा भएर गरिएका छन्, लौ न बहस गरौं । पछिल्लो समय नियुक्ति पाएका झापादेखि भोजपुरसम्मका मान्छेहरू कुन ग्रहबाट फुत्त खसेर आएका हुन् ? त्यो पनि छिनोफानो गरौं ।
सूर्य थापा कुन लोकसेवा आयोग पास गरेर बालुवाटार छिरेका हुन् वा कुन क्षेत्रबाट चुनाव जितेर ठूला कुरा गर्ने भएका हुन् ? त्यो पनि बहस गरौं । तपाईका पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पारे, उनी कुन नैतिकताको आधारमा राजनीतिक पदमा बसे, कुन प्रभावको आधारमा कामहरू गर्दै आए ? त्यो पनि छलफल गरौं ।
आज कुलमान घिसिङलाई फेरि नियुक्त गर्नुपर्ने मागहरू जनस्तरबाट उठेका हुन् । यो कुनै राजनीतिक कार्यकर्ताको माग होइन, जनताको माग हो । जनताले आफ्नो आवाज सामाजिक सञ्जाल र सडकमार्फत राखेको छ । तर जनताको आवाजलाई दबाउने काम १४ वर्ष जेल बसेका प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल भदौ २९ गते सकिँदैछ भन्ने थाहा पाएर पनि पर्याप्त गृहकार्य नगरी सरकारले आलटाल गरेर जसरी भएपनि कुलमान घिसिङको बिदाइ नै रोज्न पुग्यो ।
जस्तो कि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई के लागेको छ भने कुलमान घिसिङलाई मैले ल्याएको होइन, प्रचण्डले ल्याएको हो, मिडियामा पनि कुलमान घिसिङले प्रचण्डको नाम लिएर बोलेका छन्, त्यही भएर यिनलाई फेरि नियुक्त गर्दा प्रचण्डलाई नै यसको मुख्य जस जान्छ र जनताले प्रचण्डलाई नै मन पराउँछन् भन्ने डर छ ।
अर्को डर प्रचण्ड मात्र होइन, पूर्व नेकपाको अर्को शक्तिशाली नेता जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’को पालामा कुलमान घिसिङ आएका हुन्, हामीले त राधा ज्ञवालीकै पालामा चिलिमेबाट हुत्याउन लागेको हो यो हामीले ल्याएको मान्छे होइन भन्ने परेको छ । सल्लाहकारले पनि यसैगरी बुझेका छन् ।
तर के कुलमान घिसिङलाई पूर्व माओवादीले नै ल्याएको हो त ? के तत्कालीन सरकारले ल्याएको होइन ? के सरकारले आफूलाई सहज हुने र काम गर्न सक्ने मान्छे ल्याउन सक्दैन ? सरकारहरू त फेरबदल भइरहन्छ नि ! हिजो जनार्दन शर्मा मन्त्री थिए, आज वर्षमान पुन छन् ।
अनि बाहिर भन्नेहरूले यो जनार्दन र वर्षमानको इगो र टक्करका कारण यस्तो भएको हो भन्छन् तर त्यसो होइन । खासमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै कुलमान घिसिङलाई फेरि नियुक्ति गर्न चाहेको होइनन् । किनकि कुलमान घिसिङ केपी ओलीको सम्धी होइनन् । के कुलमान नेताको सन्धी नहुनु नै अपराध हो र ?
अर्को माफियाको पनि ठूलो गिरोह लागिपरेको छ । भारतीय व्यापारीको जेनेरेटर कुहिने अवस्थामा पुगेको छ । उनीहरूले नेपालमाथि गरेको लगानी ध्वस्त भएको छ । यसकारण पनि ती शक्तिले कुलमान घिसिङको बहिर्गमन नै अन्तिम विकल्पको देखेका थिए । जुन विकल्प पूरा गर्न बालुवाटार नै लाग्यो ।
अन्यथा कुलमान घिसिङले आफ्नो कार्यअवधिको ४ वर्षमा प्राधिकरणले गुमिसकेको साख फिर्ता ल्याएका थिए । कुलमानको मेहनतलाई मूल्यांकन गरेर सरकारले दोस्रो कार्यकालमा पनि उनलाई दोहोर्‍याउँदा के आकाश नै खस्थ्यो र ?
हामी सबैलाई थाहा छ । २०७३ भदौ २९ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुँदा देशमा १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ थियो । हाम्रो घरको भित्तामा लोडसेडिङको समय तालिका हुन्थ्यो । बिजुली आउँदा केटाकेटीहरू ताली बजाउँथे ।
त्यतिखेर नेपालको विद्युत् जडित क्षमता ८०० मेगावाट मात्रै पुगेको थियो । अहिले जडित क्षमता १ हजार ४०० मेगावाट पुगेको छ भने लोडसेडिङ अन्त्य भएको ३ वर्ष भइसकेको छ । के यो सामान्य इच्छाशक्तिका कारण भएको हो ?
कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा दर्जन बढी रुग्ण आयोजना सम्पन्न भएका छन् । यसबीच ३० मेगावाटको चमेलिया, ६० मेगावाटको त्रिशूली–३ ‘ए’ र १४ मेगावाटको कुलेखानी–३ लगायतका रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पूरा भएको छ ।
४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी, १११ मेगावाटको रसुवागढी र ५७ मेगावाटको साञ्जेन जलविद्युत् आयोजना चालू आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न हुँदैछन् । विद्युत् बिक्री पनि ४ वर्ष अघिको तुलनामा दोब्बर भएको छ । ४ वर्ष अघिसम्म ३७ लाख मेगावाट आवर विद्युत् बेच्ने प्राधिकरण अहिले करीब ६५ लाख मेगावाट आवर विद्युत् बिक्री गर्दै आएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् सेवा पहुँच विस्तारमा पनि महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ । २०७२/७३ मा ग्राहक संख्या २९ लाख ६९ लाख ५७५ थियो । पछिल्लो ४ वर्षमा यो संख्या करीब ४२ प्रतिशतल बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कूल ग्राहक संख्या ४८ लाख पुगेको छ ।
६३ प्रतिशत जनतामा ग्रीडमार्फत विद्यत् सेवा पुगेको अवस्थामा प्राधिकरणमा घिसिङको प्रवेश भएको थियो । हाल त्यस्तो जनसंख्या ८६ प्रतिशत पुगेको छ । ४ वर्षभित्र थप २३ प्रतिशत जनसंख्यामा राष्ट्रिय प्रसारणमार्फत बिजुली सेवा पुगेको छ ।
दिलनिशानी मगरले लेखेकाे याे आलेख हामीले लाेकान्तरबाट सभार गरेका हाैं तर कुलमानको जहाँ त्यहीँ हाईहाई थियो । किनकि जहाँत्यही उज्यालो थियो ।